Gaaffiif Deebii Jaal Marroo fi RSWO waliin taasisan – Ayyaantuu
[ October 7, 2021 ] ODUU Hatattama Xuyyurii Ethiopia meshale warana fi warana Ertiraa Tigraay galchu kuno	Afaan Oromoo
HomeAfaan OromooGaaffiif Deebii Jaal Marroo fi RSWO waliin taasisan
Via Dursaa O Abaadir , April 2, 2020
Gaazixeessaa xiiqii dhugaasaa Ajajaa WBO Zoonii lixaa Jaal #marroo Gaaffiif waamicha keenya fudhattee Gaaffiif deebii keenya kabajjee toora bilbilaa irratti nuuf argamuu keetiif galatoomi.
Akkuma waliinuu Quba qabnu dhibee koronaa (Covid 19) jedhamutu addunyaa Guutuu shororkeessaa jira mootummaan koloneeffataa impaayira ixoophaayaa eggannoo godhaa hin jiru.
Gaama Tokkoon immoo WBO balleessineerra Marroo qofaatu dhagaa keessatti hafe jedha Biraanuu juulaadhaa mee gaggabaabsii Yaadakee nuuf gumaachi olola warri kun ofanii fi dhimma koroonaa vires kana maal quba qaba oromoonni ati keessa sochootu.
Jaal Marroo Hayyee Hayyee Fayyaa ta’i egaa wanni dhukkuba kanaa muka jigee ciisutti qottoon baayyata jetti oromoonii Rakkoo garbummaa oromoon keessa jiru keessattuu tarkaanfii hamtuun oromoota kallattii addaa addaa irratti adeemsifamaa jiruu akkuma jirutti ta’ee wanti dhukkuba kanaammoo waabiraatigaa. isa kana irrattigaa wantin jechuu danda’u hinjiru. maal jenna wanti jedhan hinjiru. rabbummaan nutuffadhuu nubira darbi yoo jenne malee isa kana akka itti irra anaan illee Balleessuu irrattii namni kaayyeeffatee adeemaa jiruu. wantimmoo godhamuu qabu hawaasi keenya ofuma isaatii ofeeggannoo hanga danda’e gochuu qaba.
Biyya bishaan qulqulluun ittiin harka dhiqatan hinjirre keessattimmoo baayyee rakkisaadha dhukkubichi qulqullinaan waan wal qabatuuf ummanni keenyammoo manaa bayeellee galuu danda’aa hinjiru bishaan essaa argata? ummanni keenyaa baadiyaa jirummoo qunnamtii isaa baadiyaama irratti murteeffatee naannoo naannoo jiruttimmoo bishaanuma laga yaa’u yoo fayadamee gaariidha akkaa taamti itti laga dhaqanii bishaan waraabataniyyuu hiniru gama hundaan adamoo irra jira waan ta’eefii hanga danda’ame lubbuu ofii olfachuu fi kan of olche ammoo nama isa bira jiruu fi maatii isaa du’a olchaa maatiin oleemmoo saba du’a olchaa sabnimmoo biyya olchaa akkasitti ummati keenya akka taattafatun dhaammachuu barbaada.
Inni qaama ololaa waggaa tokko guutuu kanuma irra deddebiyee nama odeessu nama sammuun waan addan qabamee fi biyya saba hamma kana qabduu keessaa hattoota kashalaboota mana shiishaa fi mana alkoolii irraa waamanii bulchaadha jedhanii oggansa jedhanii gaardii godhaniifii angoo gariitin nama odeessuuf namni deebii kennu hinjiru.
Hojii malee oduu miti hojiin sunimmoo diida/Ifa keessa jiraa egaa amma iccitiin sichi gadi yaa’u hedduutu jira. erga qunnamtiin kun as deebiyee.
Mootummaan abbaa hirree kun bilbila kanas balleessee kan yaroo dheeraa turee qoophii taasise kasaaruu irraa kan hafe ijifannoo isaan argatan tokkollee hinjiru.
Kisaaraa addatti guurratanii olola sobaatiin lafa balleessa turan
OMN: Irreecha Washington, DC 2021 (Ful 3, 2021)